Uvavanyo lweNetflix ngeentsuku ezisi-7 zobhaliso oluncinci lwe-2,49 euro | Zonke iinkonzo ze-intanethi
INetflix iyaqhubeka nokuvavanya iimodeli ezintsha zobhaliso kwaye enye yazo kukuba nakho ukuba nayo yonke ikhathalogu ngokupheleleyo kwiintsuku ezisi-7 nge-euro ezingama-2,49. Ngamanye amagama, ubhaliso oluncinci apho nawuphina umsebenzisi anokuziqhelanisa "nomabonwakude" wokunikezelwa kweli qonga likhulayo.
Kwaye ikhathalogu enayo INetflix ingaphezulu kokutsala kwizigidi zabantu kumhlaba jikelele. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa imodeli yayo yobhaliso, onokuthi ngayo, njengoko uhlawula, ukwazi ukusebenzisa umxholo ukuya kuthi ga kwizikrini ezi-4 ezahlukeneyo, ivumela abasebenzisi abaliqela ukuba bonwabele izinto ezingabalulekanga kunye noluhlu oluninzi.
Ukuba iimvavanyo zobhaliso oluncinci lwe Iintsuku ezingama-7 nge-2,49 euro Sizaliseka, oku kuya kuthetha ukuba ngamaxesha athile onyaka sinokusebenzisa lonke ikhathalogu yeNetflix. Oko kukuthi, ayinguye wonke umntu onalo ixesha eloneleyo lokonwabela konke okuqulathiweyo, ke ukubhalisela iNetflix ngexesha leKrisimesi, kanye xa uneentsuku zokubukela umabonwakude ngakumbi, le modeli intsha ayizotywanga.
Ngaphandle kwento yokuba ukuba kukho ixesha elinomdla kuthi, njenge Okwesithathu kwezinto ezingaqhelekanga eziza kukhutshwa ngo-2019, zii-2,49 ze-euro kuphela esinokuthi "siginye" ngaphandle kokuhoya. Okwangoku, ayaziwa ukuba iya kuphehlelelwa nini ipakeji entsha yobhaliso, ke sinomdla kuzo naziphi na iindaba malunga noku.
Kwii-euro ezingama-2,49 unokufikelela kwikhathalogu epheleleyo yeNetflix uthotho, iimovie kunye namaxwebhu. Ngaphandle kolu khetho lutsha lwe-2,49 ye-euro, kwi-2,99 euro siya kuba nomda kwizikrini ezimbini, ukuze i-3,99 euro ifikelele kuzo zonke izikrini ezi-4 ngaxeshanye.
Ezinye iindlela zokuhlawula kunye ukusetyenziswa komxholo okumgangatho ophezulu weNetflix Ezininzi ezifanelekileyo ngokufanelekileyo xa zinoluhlu olufumanekayo okanye nantoni na, banexesha elininzi lokukwazi ukuzisebenzisa ezo ngcelele ngaphandle kokuyeka; besisele sisazi kutshanje ukuba utshintsho luza kuza.
Ngaphandle kwamathandabuzo iindaba ezimnandi nangona ngexa I-plusdede isimahla, I-Netflix iya kuba nzima ukukhuphisana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uvavanyo lweNetflix ubhaliso lweentsuku ezisi-7 ze-euro ezingama-2,49
Isikhangeli se-MINT sisikhangeli sewebhu sikaXiaomi sokukhangela ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo